Blaogin'i tebokaefatra | 3
04 Novambra, 2008 13:57
OBAMA SA McCAIN ?
Nifidy izay ho filoham-pireneny ny be kintana (Amerikana) androany Talata 4 Novambra 2008. Na Obama na McCain no ho lany Filoha.
Voalaza fa ity no fifidianana nampiasana vola be indrindra hatramin'izay. Propagandy io!.
Voalaza fa ity no fifidianana be mpifidy indrindra hatramin'izay.
Voalaza fa ity no fifidianana niavaka indrindra satria sambany vao mba nisy mainty hoditra (Obama) mety ho lany ho Filoham-pirenena.
Voalaza fa ity no fifidianana nahazoan'ireo radio sy TV vola be indrindra satria nanatobaka izany ireo kandida (Indrindra fa Obama).
Voalaza fa ity no fifidianana mety hanamarika ny "fiovana" any Etazonia raha Obama no lany satria io "fiovana" io no hevitra nitondrany ny fampielezan-keviny.
Mitodika any Etazonia ny mason'izao tontolo izao. Isika malagasy koa ao anatiny na dia tsy hanam-piovana "goavana" aty amintsika tany madinika aza ny politika Amerikana! Nefa dia miandrandra izany avokoa ny tany Afrikana satria mana-nila avy aty ingahy Obama!!!
Raha Amerikana aho dia nifidy Obama satria fanohizana ny politikan'Ingahy Bush ihany no ataon'i McCain ka tsy tiako.Raha Amerikana aho dia efa naleviko impito mandifitr'olona ny fanavakavahana @ lafiny rehetra.Raha lany Obama dia angatahina @ Andriamanitra hahavita ny taom-piasany izy.
25 Oktobra, 2008 16:40
MIALA REHEFA TSY MAHAVITA AZY
Niteny ny Filoha Malagasy Atoa Ravalomanana Marc fa ny "faits divers hita amin'ny gazety malagasy no mampatahotra ireo mpampiasa vola ka tsy ahatongavany eto Madagasikara".
Dia lasa ny saiko.
Hiverina ve zany ny sivana satria toa milofo mafy hampiditra ireo mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara izao fitondrana izao nefa izy tenany no milaza ankehitriny fa tsy mety tonga izy ireo? Rehefa tapina ve ny vavan'ny gazety Malagasy dia izay no mety ahatongavany?
Dia ho sanatria koa ve ka ny feon'ny RNM sy TVM ary ny BMS irery no hany henon'ny Malagasy an-tapitrisany. Sanatria anie izany!
Zo fototra arovan'ny lalampanorenana ny fahafahana sy fahalalahana ka aleo ny gazety haneho ny heviny. Ampiharo ny làlana raha misy mihoa-pefy fa aza ny hafa no anilihana ny tsy fahaiza-manao. Sady ianareo rahateo no mitondra hoy ny Filoha!
Izahay mpamaky koa mila hevitra maro azo isafidianana fa efa nilaozan'ny toetr'andro ny "feo tokana".
Tsotra ny hevitro. Miala rehefa tsy mahavita azy.
Masiaka kely izao fa toa mitady ho voatohitohina ny "aferoko", dia ny fahafahako sy ny fahalalahako!